यी राशिका महिलाहरु सह वासका लागि निकै छिटो तयार हुन्छन् !! - Babal Khabar
सह वासले जुनसुकै प्राणीको जीवनमा पनि महत्व राख्छ । सह वास विना सृष्टि असम्भव छ । यद्यपी सन्तान उत्पादनको लागिमात्र नभई मानिसलाई खुसी र सन्तुष्ट राख्नको निम्ती आवश्यकता छ । यसको महत्वलाई सकरात्मक तवरले बुझ्ने हो भने यसबाट जीवनलाई सुखद् र मर्यादित बनाउन सकिन्छ ।
यदि सह वास गर्दा दुई मध्ये एकजना सन्तुष्ट हुन सकेन भने सम्बन्ध दिगो रहन सक्दैन । त्यसैले आफ्नो पार्टनरलाई सन्तुष्ट राख्न उसको मनोविज्ञानलाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।महिलाहरूको राशि अनुसार सह वासको चाहनापनि फरक हुन्छ । त्यसैले तपाईंको पार्टनर कुन राशिको हो सोही अनुसारले सह वास गर्न सक्नुहुनेछ ।
मेषराशि : यो राशिका महिलाको मुख र निधार एकदमै संवेदनशील हुन्छ । तपाईंले मुख र निधारमा चु’म्ब’न गर्नु भयो भने उनीहरुमा चाँडै उ त्ते जना बढ्दछ । मेषराशिका महिलाहरु रातो रङप्रति ज्यादै आकर्षित हुन्छन् । त्यसैले तपाईंको पार्टनर मेषराशिकी छिन् भने क्रियाकलाप गर्नु अगाडि रातो रङको कपडा लगाउनु होस् ।
वृषराशि: यो राशिका महिला जति धेरै रोमान्टिक हुन्छन् त्यति नै धेरै समय क्रियाकलापमा राजी गराउन समय लाग्दछ । त्यसैले तपाईंको पार्टनर वृषराशिवाला छन् तर तपाईं चाँडै क्रियाकलाप गर्ने सोच्नु हुन्छ भने तपाईंले दुःख पाउनु भयो अर्थात् तपाईंको जीवन त्यति सहज हुने छैन जति तपाईं सोच्नु हुन्छ ।
मिथुनराशि : यो राशिका महिला सह वासको लागि सधैँ सक्रिय रहन्छन् । यिनीहरु आकर्षक वस्तुप्रति निक्कै नै ध्यान दिने हुन्छन् । उनीहरुलाई हातमा चु’म्ब’न गर्दा निक्कै आनन्द आउँछ । साथै यो राशिका महिलाहरु यस्तो रोमान्टिक ठाउँमा जान रुचाउँछन् जहाँ उनीहरुका पुराना कुरा याद आउन् ।
कर्कटराशिः यो राशिका महिला निक्कै भावुक र मानसिक रुपमा पनि संवेदनशील हुन्छन् । यसै कारणले पनि सह वासमा खासै रुची राख्दैनन् भने सह वास गर्दा पनि भरपुर आनन्द लिन सक्दैनन् । यो राशिका महिलाहरु चन्चल स्वभावका हुन्छन् । उनीहरु पार्टनरको भन्दा आफ्नो सन्तुष्टिकोलागि मात्रै क्रियाशिल रहन्छन् । तैपनि उनीहरुलाई ‘क्याण्डल लाइट डिनर’ निक्कै मन पर्ने भएकोले त्यहाँ लैजान सकिन्छ । कर्कटराशिका महिलाको स्त न सबैभन्दा संवेदनशील हुने भएकोले सह वासको सुरुवात यहिबाट गर्नु उपर्युक्त हुन्छ ।
सिंहराशि : सिंहराशिका महिलालाई बनावटी कुराहरु वा देखावटी सौन्दर्य र चिजबस्तुहरुप्रति निक्कै आकर्षण हुन्छ । यिनीहरु रोमान्टिक वातावरणमा चाँडै र सजिलै घुलमिल हुनसक्छन् । यो राशिका महिलाहरु आफ्नो पार्टनरलाई आफूमाथि हावी हुन भने दिँदैनन् । यिनीहरुको पिठ्युँ सह वासको लागि निक्कै संवेदनशील हुन्छ ।
कन्याराशिः यो राशिका महिला आफ्नो इच्छालाई चाँडै बाहिर निकाल्न चाहँदैनन् तर भित्र भने सह वासको भोक निक्कै हुने गर्दछ । यिनीहरुलाई पेटमा किस गर्न निक्कै मन पर्दछ । स म्प र्क गर्नु भन्दा अघि उनीहरुलाई पेटमा स्पर्श गर्ने वा छुने गर्नु उपर्युक्त हुन्छ ।
तुलाराशि : यो राशिका महिलाहरु सह वासको लागि निक्कै नै छिटो तयार हुन्छन् । उनीहरुको राशि स्वामी शुक्र भएकोले पनि यस्तो भएको हो । शुक्रलाई उ’त्ते ज ना बृद्धि गर्ने ग्रहको रुपमा लिइन्छ । यो राशिका महिलालाई सह वासको बेला कुराकानी गर्न बिलकुलै मन पर्दैन । यिनीहरुको पिठ्युँको तल्लो भाग निक्कै संवेदनशील हुने भएकोले त्यहाँ स्पर्श गरेर सह वासप्रति उ त्ते’ज ना जगाउन सकिन्छ ।
वृश्चिकराशि : यो राशिका महिला सह वासको लागि निक्कै नै संवेदनशील हुन्छन् । उनीहरुलाई बडी मसाज मन पर्ने भएकोले मसाजबाटै चाँडै उ त्ते ज ना पैदा गराउन सकिन्छ ।
धनुराशि : धनुराशिका महिलाहरु धार्मिक प्रकृतिका हुन्छन् । यिनीहरुलाई रोमान्सको लागि एकान्त ठाउँ मन पर्छ । यो राशिका महिलालाई रोमान्टिक गीत, सह वास फिल्म वा कुराकानीबाट चाँडै प्रभावित गर्न सकिन्छ । यिनीहरुको जाँघ सबैभन्दा संवेदनशील हुन्छ ।
मकरराशि : यो राशिका महिलाको खुट्टा निक्कै संवेदनशील हुन्छ । खुट्टाको कुनै पनि भागमा कि’स गरेर वा स्पर्श गरेर उनीहरुलाई उ’त्ते’ज’ना बढाउन सकिन्छ । यिनीहरुलाई सह वासको दौरान कुराकानी गर्न बिलकुलै मन पर्दैन । यिनीहरुलाई रिझाउन घुमफिर गर्ने वा रोमान्टिक कुराकानी गर्न सकिन्छ ।
कुम्भराशि : यो राशिका महिलाको काँध तथा कुहिनो ज्यादै संवेदनशील हुन्छ । त्यसैले यो भागमा अलिकति पनि स्पर्श हुँदा उनीहरु चाँडै उ त्ते जि’त बन्दछन् । यिनीहरुलाई रातीको समयमा नुहाइ धुवाई गरेर सह वास गर्न निक्कै मन पर्छ । यिनीहरुलाई फरफ्युम पनि निक्कै मन पर्दछ ।
मीनराशि : यो राशिका महिलालाई आँखामा आँखा जु’धा’एर हेर्न ज्यादै मनपर्छ । यिनीहरुलाई थोरै ज ब र ज स्ती वा थोरै चलेको पनि मन पर्छ । यिनीहरुको कुर्कुच्चा निक्कै संवेदनशील हुने भएकोले यहाँ म’सा’ज गरेर पनि उ’त्ते’ज’ना बढाउन सकिन्छ ।
(यो सामग्री एजेन्सीको सहयोगमा तयार पारिएको हो । यहाँ उल्लेख भएअनुसार सबैको स्वभाव यस्तै हुन्छ भन्ने होइन । तपाईंको पार्टनरको स्वभाव कस्तो छ त्यो तपाईंले अध्ययन गर्ने कुरा हो । तैपनि तपाईंले अहिलेसम्म पार्टनरको स्वभाव अध्ययन गर्नु भएको छैन र यसैकारणले जीवनमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने माथि उल्लेखित कुराहरुलाई अनुशरण गरेर हेर्न सक्नु हुन्छ । यो सामग्री प्रकाशन गर्नुको हाम्रो उद्देश्य तपाईंको जीवनलाई सहज बनाउन केही सहयोग पुगोस् भन्ने नै हो ।)
PrevBreaking News:>> तिहारकै मुखमा भोलीदेखी फेरी सार्वजनिक सवारी साधन अनिश्चितकालका लागि बन्द घोषणा !! (सुचनासहित)
nextछोरीको शव गा’ड्’न गएका पितामाथि भगवानको कृपा परेपछी भयो सोच्नै नसकिने चमत्कार !! [भिडियो हेर्नुस्]